Media Mission Nepal सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गरे परिएला कानूनको फन्दामा - Media Mission Nepal
सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गरे परिएला कानूनको फन्दामा
Published On : 21 February, 2019 5:19 pm
रमेश लम्साल । काठमाडौँ, ९ फागुन : सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यसो गर्नुभएको छ भने अब तपाइँलाई कडा कारवाही हुन सक्छ । रमाइलोको लागि त हो नि, त्यो मेरै मान्छे हो भन्दै हेलचेक्रयाइँसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।